DAAWO: Wargayska Caanka Ah Ee L'Équipe Oo Qish Wayn Ka Bixiyay Saddexda Xidig Ee Ugu Sareeya Abaal Marinta Ballon d'Or Iyo Ciyaartoyga Guulaystay Oo Laga Fahmay.. - GOOL24.NET
DAAWO: Wargayska Caanka Ah Ee L’Équipe Oo Qish Wayn Ka Bixiyay Saddexda Xidig Ee Ugu Sareeya Abaal Marinta Ballon d’Or Iyo Ciyaartoyga Guulaystay Oo Laga Fahmay..
Xaflada abaal marinta Ballon d’Or ee sanadkan 2018 ayaa la qaban doonaa December 3 iyada oo markale ay majalada France Football soo jeedin doonta dareenka kubbada cagta aduunka. Bishii October waxay France Football shaacisay 30 ka musharax ee abaal marintan ku tartamaya balse wargayska caanka ah ee L’Équipe oo qayb ka ah soo bandhigida liiskii abaal marinta iyo waliba tabinta xalfada ayaa qish sii bixiyay.
Muuqaal uu wargayska L’Équipe ku shaaciyay in December 3 la qaban doono xaflada abaal marinta Ballon d’Or 2018 ayaa laga fahmay xidiga ku guulaystay abaal marintan inkasta oo ayna wali ahayn arin rasmi ah oo lagu dhawaaqay.
Muuqaalka wargayska L’Équipe waxaa lagu bilaabay Cristaino Ronaldo oo ah xidiga abaal marinta Ballon d’Or ku soo guulaystay sanadkii la soo dhaafay waana arin ay markaasta cadahay in la sheegayo ciyaartoygii hore ugu soo guulaystay balse saddexda muuqaal ee Ronaldo ku soo xigay ayaa wax kala cadeeyay.
Kadib markii la soo bandhigay muuqaalka Cristiano Ronaldo oo sare u haya abaal marintii Ballon d’Or ee uu sanadkii hore ku soo guulaysta waxaa ku soo xigay muuqaalka da’yarka xulka qaranka France iyo kooxda PSG ee Kylian Mbappe kaas oo muuqaalkan laga fahmay in uu yahay xidiga ku guulaystay.
Waxaa muuqaalka saddexaad ku jira Raphael Varane oo isna Mbappe kula soo guulaystay koobkii aduunka waxana loo fahmay in Varane uu kaalinta labaad ka galay codbixintii France Football ee abaal marinta Ballon d’Or.
Kaalinta saddexaad marka laga reebo muuqaalka Ronaldo waxaa ku soo baxay Luka Modric kaas oo markii hore la filayay in uu abaal marintan ugu cad cad yahay laakiin sida muuqaalka L’Équipe laga fahmay waxaa loo arkaa in Modric uu kaalinta saddexaad galay.
Kadib waxaa muuqaalka ku jira ciyaartoyda kale ee Lionel Messi, Mohamed Salah, Ede Hazard iyo liiska mushariinta kale oo uu markale Ronaldo ku jiro waana arin muujinaysa in muuqaalka hore uu ahaa xusuusta guushii hore balse waxaa sidoo kale shaki keenay sababta Griezmann aanu ugu soo muuqan maaliyada xulkiisa halka Mabppe, Varane iyo Kante ay garamaanta xulkooda ee ay koobka aduunka ugu soo guulaysteen ugu jiraan muuqaalkan.
Dhawaan wayay ahayd markii uu wariye soo bandhigay in Modric, Varane iyo Mbppe ay hogaaminayaan codbixinta Ballon d’or kadib markii kala badh la tiriyay laakiin waxay hadda u muuqataa in Mbappe uu aduunka kaga yaabsan karo in uu abaal marintan ku guulaysto isaga oo aan xataa 20 sano jir gaadhin.
Si kastaba ahaatee, waxaa aad u soo dhawaanaya waqtiga ay majalada France Football si rasmi ah ugu dhawaaqi doonto xidiga ku guulaystay abaal marinta Ballon d’Or iyo waliba kaalin kasta oo ay ku dhamaystaan 30 ka musharax.
Haddaba halkan ka daawo muuqaalka wargayska L’Équipe uu soo saaray ee laga sii fahmay saddexda xidig ee ugu sarayn doona abaal marinta Ballon D’or iyo in Mbappe uu abaal marintan ku guulaysan doono.
Haddaba akhriste, sideed u aragtaa haddii uu Mbappe ku guulaysto abaal marinta Ballon d’Or iyo in uu ku garaaco ciyaartoyda magaca wayn leh?